Wararka - Maqaal cusub- Guddi baasaboor oo fidsan
Baasaboorka fidsan ayaa ah in la furo tuubada baasaboorka asalka ah iyada oo aan dildilaac loo marin iyada oo la jilcinayo lana farsameynayo tuubooyinka baasaboorka xaashida baasaboorka, si loo ballaariyo adeegsiga walxaha bamboo.
Badeecada baasaboorka ee fidsan waa alaab saxan dabiici ah, sidaa darteed waxaa loo adeegsan karaa sagxadda baasaboorka, looxyada goynta baasaboorka, qoryaha bamboo, alaabta bamboo, farsamada gacanta ee bamboo iyo alaabooyin kale, oo leh suuq aad u ballaaran.
Maadaama maadada baasaboorka oo dhami ay tahay gabal dhan oo looxa baasaboorka ah, xabagta mar dambe looma isticmaalo in lagu ballaariyo xargaha baasaboorka. Sidan, xiriir toos ah oo ka dhexeeya wakiilada kiimikada (xabagta) iyo cuntada waa laga fogaadaa iyada oo loo adeegsado sabuuradda goynta, taas oo hagaajinaysa isku -dheellitirka sugnaanta cuntada.
Farsamada fidsan ee tuubada baasaboorka ceeriin ayaa si weyn u hagaajisay saamiga isticmaalka marka la barbar dhigo farsamadii farsamaynta ka samaynta baasaboorka. Iyada oo ay ugu wacan tahay isticmaalka maaddada oo aad u yaraatay, qiimaha alaabada baasaboorka ee la xiriirta ayaa la yareyn karaa, si geedka bey'ada u fiican ee baasaboorka moso uu u beddeli karo alwaax iyo bir aad u ballaaran, taas oo ah xaqiijinta dhabta ah ee "beddelka baasaboorka qoryaha" iyo "adeegsiga bamboo si uu ugu guuleysto qoryaha ".